Tonga amin'ny fakantsary miady amin'ny polisy ny polisy - Vahaolana OMG
Tonga amin'ny fakantsary miady amin'ny polisy ny polisy
Fanekena ny endrika mety manova ny fiarovana ny seranam-piaramanidina, toeram-piasana ary trano fonenantsika, fa eo amin'ny fampiharana ny lalàna, izay mety hiandrasan'ny olona ny hahalala fatratra an'ity teknolojia vaovao sy matanjaka ity, dia tsy natao sambo mandeha izany. Ny fiampangana ny tsy fahatomombanana, ny tsy fanarahan-dalàna, ny famindram-po ary ny tsy fahatomombanana dia lasa fitsipika. Fa ny tena olana dia ny fanaparitahana ireo motera rehetra mifehy ny vahaolana ho an'ny tarehy dia mila voaomana ho amin'ny tontolo tena izy. Ary, ny mampiavaka indrindra, ireo mpanenitra manodidina ny fampiasana sy ny fananganana ny teknolojia dia tokony ho voarindra tsara.
Tany am-boalohany dia natao ny fanekena ny tarehimarika mba hahazoana antoka tsara sy ny fifehezana ny fidirana, hiasa amin'ny fepetra voafehy ary hanamafisana fa ny olona iray no ambaran'izy ireo. Ankehitriny ny fakantsary dia mandinika olona maro, mampitaha ny tarehy rehetra mandalo lisitra famantaranandro. Ny tenany dia feno fahasarotana. Fa rehefa misy lalao dia inona no hitranga? Ahoana no fomba hisian'ny kaontim-bola momba ny kalitao, ny toe-javatra iainana sy ny varavarana eo amin'ny varavarana? Ahoana no ahafahan'ny mpampiasa mamindra ny fifantohana amin'ny teknolojia mankany amin'ny valiny?
Miaraka amin'ny fananganan'anaka tarika amin'izao fotoana izao, mety ho traction fotsiny ihany ianao hamaritana ireo fanamby ireo. Ny herin'ny polisy dia manao fitsapana mavitrika amin'ny fanekena ny tarehy, manao raharaha momba ny fampiasana. Mbola betsaka ny asa tokony hatao, saingy ny valiny an'io famahana ny fampielezana io dia mety, raha ny marina, eo alohan'izy ireo.
Ny vaovao tamin'ny herinandro lasa izay dia nanandrana ny FBI ny fanekena ny tarehin'i Amazon dia nifanena tamina fahasamihafana tsy ampoizina avy amin'ny efitrano fanaovana tsiambaratelo izay nanapa-kevitra ny fanekena ny fahazoana fampiharana ny lalàna dia vanim-potoana ratsy. Raha ny zava-nitranga dia ny ohatra notononin'ny FBI ho an'ny toerana azon'ny teknolojia nampiasain'ny haitao dia tsy nisy afa-tsy ilay tsy nampoizin'ity resabe ity izay: azo raisina an-tapitrisany ny horonan-tsarimihetsika voarakitra an-tapitrisany mba hahitana ny mpijery Vegas, Stephen Paddock. Nanana solontena sy mpandinika izahay, valo isaky ny fiovàna, miasa 24 / 7 mandritra ny telo herinandro amin'ny alàlan'ny horonantsary rakitsoratra FBI Christine Halverson tamin'ny fivoriana nataon'ny AWS tamin'ny volana Novambra.
Na dia betsaka aza ny masoivoho mpampihatra lalàna dia mampiasa fankatoavana ny tarehy mba handinihana ny firaketana horonantsary voarakitra, firaketana fotoana sy fanandramana, sarotra kokoa kosa ny ampiasaina amin'ny fotoana tena izy, amin'ny tena tontolo. Ny matematika fandinihana ny onlooker rehetra eny amin'ny habaka be olona sy ny lisitra fiambenana kely dia manery ny fahazoana ny tarehy amin'ny fetra. Ny rafitra tena tsara indrindra ihany no afaka mizaka izany. Vokatr'izany dia mbola misy ihany ny fankasitrahana tarehy tsy misy fika velona ampiasaina ao anaty policing mahazatra. Fa efa hiova izany.
Ny hery iray hanamarina ireo safidy ho an'ny fankatoavana ny tena fotoana dia ny Polisy Metropolitan any Londres. Ny kaomisera Cressida Dick dia nilaza tamin'ny herintaona fa lasa tsara kokoa ny minisitry ny tarehy. Mieritreritra aho fa hiandry antsika ny vahoaka mba hieritreritra ny fomba fampiasana io teknolojia io sy hahitana raha mahomby sy mahomby ho antsika izy io. Saingy tamin'ny volana Desambra, rehefa nametraka fiara fitandremana tao amin'ny faritr'i Soho tanàna ny Met Police, izay misy tranom-baravarankely misy tafo lava-tafo mba hanamarina ireo lamesa krismasy amin'ny lisitra famantaran-kelin'ireo mpanao heloka bevava, dia niteraka valiny marobe avy amin'ireo mpikatroka manokana. Ny talen'ny Big Brother Watch dia niantso azy io ho fandaniam-potoana mampivarahontsana ny fotoan'ny polisy sy ny volam-bahoaka ary nilaza izy fa efa lasa izany satria efa narian'ny polisy ity teknolojia mampidi-doza sy tsy manara-dalàna ity.
Fantatry ny Met Police ny fahafantarana ireo votoaty maoderina. I Ivan Balhatchet, ilay tetika taktikaly Met tamin'ny fankatoavana ny tarehy mivantana, dia nilaza tao anatin'ny fanambarana tamin'ny volana Desambra fa manohy mifandray amin'ny mpiray tsikombakomba maro samihafa isika, misy ireo izay mazoto miatrika ny fampiasantsika an'io teknôlôjia io mba hanehoana mazava sy hanohizan'ny adihevitra tsara, efa nasainay nanasa olona sy vondron'olona manana hevitra tsy azo itokisana amin'ny fampiasana ny teknolojia manaiky ny endriny ho an'ity fanitarana ity.
Ny fiavahana amin'ny fankatoavana tarehy, ny fakantsary vita amin'ny vatana dia efa nahita famafazana faobe. Ireo fitaovana horonan-tsarimihetsika mandeha amin'ny vatana ireo izao dia manararaotra ny fanamiana polisy eran'izao tontolo izao, manome fitantanana ny porofo, fiarovana ny manamboninahitra ary fampiononana ho an'ny daholobe. Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia mirakitra horonan-tsary ho an'ny fihenan'ny rafitra fitehirizana ara-batana na rahona. Ny fakan-tsary mihetsika amin'ny vatana ihany koa dia mipetraka mivantana amin'ny alàlan'ny fifehezana efitrano. Ny hafa kosa mifandray amin'ny holavin'ny fitaovam-piadiana mba hampahomby ny horonantsary fandraisam-peo. Rehefa mandroso ny fitaovana finday dia ireo modely vaovao ho an'ny fakantsary vatana izay miorina amin'ny sehatra Smartphone dia namboarina ho arahana bebe kokoa. Midika izany fa hihaona ireo teknolojia roa. Ny fanekena ny tarehy amin'ny fakan-tsary mitazona vatana dia mety ho takatra manaraka. Mamela ny manampahefana amin'ny lisitra famantaranandro ho an'ireo olon-dratsy maniry, olona mahaliana, zaza tsy hita, olon-dehibe mora hita… Miroso ny lisitra.
Tamin'ny Desambra, na dia nanohitra ny vaniny maintso aza i London, dia misy fitsapana hafa amin'ny fanekena ny tarehy niseho tany amin'ny tanàna hafa an-tapitrisany kilaometatra maro. Ity fitsapana ity dia tsy nahatonga lohateny lehibe. Ny endri-javatra nampiseho azy dia tsy voafaritra. Fa mamaritra bebe kokoa ny fomba hametrahana ny fankatoavana ny tarehy amin'ny fanaovana polike mialoha. Tahaka ny an'i London, ny làlana tsara indrindra dia nandeha an-dalambe tamin'ny tanàna misy ny katala fiambenana manodidina ny olona roa arivo.
Fa io fitsapana io dia manakana ny hijanonana sy hitadiavana azy, miaraka amin'ny fankatoavana tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana, haingana kokoa noho ny CCTV na ny fanaraha-maso. Ny fitsapana dia nifandray amina manampahefana sasantsasany mitafy fitaovana miasa amin'ny fotoana tena mitovy amin'ny lisitry ny fiambenana iray ihany. Tao anatin'ny ora iray voalohany, fisamborana roa no natao taorian'ny lalao nifanarakaraka tamin'ny tarehy. Ireo olona voarohirohy dia voarara ankehitriny.
Mampitsahatra ny fitadiavana sy ny fikarohana. Ny fahefana toy izany dia mifototra amin'ny fototry ny fanaovana pôlitika amin'ny alàlan'ny fankatoavana, mametraka fanontaniana momba ny fanaovana profiling sy ny fizarana ary ny fanamarinana. Na inona na inona fitsikerana izany dia mety ho mahomby tsara, maka fitaovam-piadiana eny an-dalambe ary misambotra ireo tompony. Ny fanekena ny fanamafisana dia ampahany lehibe amin'ny fomba. Body cameras miaraka amin'ny fankatoavana ny tarehy dia azo antoka fa voamarina tsara ny mombamomba azy, mifanaraka amin'ny politika avokoa. Ny mpanao lalàna malaza, ny olona liana - na voatondro na tsia, ny zaza tsy ampy taona sy ny olon-dehibe dia azo fantarina avokoa. Ho fanampiana amin'ny fahatrarana eo amin'ny lafiny ara-tsaina, dia mitondra tombony lehibe izany. Ny fisamborana voatonona etsy ambony ihany dia tsy afaka tamin'ny alàlan'ny teknika toy izany.
Ny fampiasana ny faneken'ny tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia manome fiarovana amin'ny fiampangana fanavakavahana ara-poko. Ny politika dia azo apetraka amin'ireo manamboninahitra tsy hikaroka ireo izay tsy fantatry ny tarehy, na dia ajanony aza. Raha misy ny fiampangana dia mijanona sy mitady fikarohana momba ny heloka bevava ambany lenta any amin'ireo vondron'olona voafaritra, ny fifanajana ny tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia manome fifandanjana. Io karazana fiarovana io no hanamora ny fanekena faingana kokoa.
Ny fankatoavana tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia hanome fanamafisana faharoa ho an'ny lalao avy amin'ny fiara mpanara-maso sy fakan-tsary CCTV. Taorian'ny lalao voalohany dia nandeha tamina olona ilay tompon'andraikitra mandeha an-tongotra ary nanao fisavana fanamarinana faharoa avy amin'ireo fakantsary vatana, nihazakazaka avy amin'ny lisitry ny fiambenana iray ihany. Izy irery ihany raha misy lalao aroso kokoa. Raha ny tenany, izany dia tena arofanina ara-materialy hanoherana ny antsoina hoe positibo bogus. Izy io koa dia manome olona amin'ny olona iray hifampiresaka alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra momba ny fisamborana.
Edge art Intelligence:
Ny fifandraisan'ny fakantsary marobe amin'ny lisitry ny fiambenana iray ihany ary samy manokatra ny tombontsoa midadasika amin'ny fantsom-pifandraisana. Ny tombony hafa amin'izany dia ny fahaizana mampiasa fakantsary vatana manan-tsaina mba hanomezana amboara voalohany, amin'ny famerana ny fihodinam-pandeha, miaraka amin'ny lalao avy eo alefa any amin'ny rafi-pokontany afovoany mampiasa ny motera AI mitovy, na ny motera AI hafa. na ny masinina AI maro aza, mba hanomezana sivana mety tsara alohan'ny hisian'ny 'match' omena ny mpandraharaha iray. Izany rehetra izany dia hitranga ao anatin'ny segondra roa.
Ity no tokony ho taona amin'ny faneken'ny tarehy ny fanamelohana ny tsy fitoviana misy sy ny tsy fahatomombanana. Tokony ho taona amin'ny taona izay misy ny fanekena fa tsy ny teknolojia ekena rehetra akory no mitovy. Fitaovana samy hafa tokony hakana noho ny tanjona samihafa. Ary ny fanombanana marimarina amin'ny motera toy izany amin'ny toe-javatra voafehy dia tokony hanome lalana ny tena mpanjifa sy ny porofo ny valiny.
Ny andiany voalohany tamin'ny fakantsary niasa amin'ny vatana ankehitriny dia nifantoka tamin'ny firaketana horonantsary horonantsary ho an'ny rafitra fitantanana porofo. Ankehitriny, ny fakantsary Body 2.0 dia hamindra ny fifantohana mivantana amin'ny streaming video, ny fankasitrahana endrika ary ny fitaovana Edge-AI. Ity andiam-peo vita amin'ny vatana manaraka ity dia hiara-hiasa amin'ny mekanika IoT an-tapitrisany maro izay halamina amin'ny tambajotra 4G sy 5G mandritra ny taona maro ho avy. Amin'ny farany, ny junction dia hahita ireo karazana fakantsary fampiasan-tena ampiasaina ankehitriny morph ho telefaona marani-doha sy finday lehibe izay hiaraka amin'ny fahitana fisintonana sy fisintonana miaraka amin'ny sisina AI analysana ary famokarana angon-drakitra ho an'ny manampahefana frontline. Ny vanim-potoanan'ny fakantsary tokana-tsy misy fotona dia efa hifarana.
Ho fankatoavana ny tarehy dia tokony ho manodidina ny fampiasana tsy misy fepetra ny fahafahan'ny marketing amin'ny marketing sy ny fiarovana ara-barotra ny adihevitra ao amin'ny 2019. AI amin'ny silikon voaody amin'ny fakan-tsary IP mora vidina, mahatratra ny rehetra. Ny fampiasana ity teknolojia amin'ny fampiharana ny lalàna ity dia hijanona ho somary miharatsy.
Ary noho izany, raha ny resaka policing, 2019 dia hoheverina ho toerana fanovana ho an'ny tarehy. Ny fitsapana dia ho morphives. Hisy valim-pifidianana ny famoahana entana. Ho resy ny fifanolanana. Ny ankamaroan'ny vahoaka dia hisafidy ny fiarovana sy filaminan'ny tena manokana noho ny tsiambaratelo manokana.
Tonga amin'ny fakantsary miady amin'ny polisy ny polisy no farany niova: Oktobra 8th, 2019 by Admin
4323 Total Views 1 Views Today